Telescopic Hazavao Amin'ny Snow sahiratsy - China Richina
Modely No .: HT458
Firodanan'ny Length: 1160 * 1560mm
Telescopic Hazavao Amin'ny Snow lapelina no fantatra ho tsara, mateza sy maivana. Ny Telescopic Snow lapelina amin'ny aluminium Adjustable handamina voalamina tsara sy Maneho 116-156cm endrika, tsara teo foana rehefa mila izany. ity ny oram-panala angady amin'ny hareza lehibe dia afaka manamarina ny oram-panala mahomby sy amin'ny fomba mahomby. izany Telescopic sahiratsy Snow amin'ny rafitra maivana mahatonga azy portable sy Travel-namana. Mamela anao hanitsy ny hahavony ho an'ny mampitombo tsy hanahirana. izany Telescopic sahiratsy Snow koa amin'ny aina mafy izay tsara ho an'ny fikirakirana tsara kokoa.
Plastic Snow manosika angady amin'ny Adjustable Aluminium tahony
firodanan'ny 1160-1560mm halavan'ny
Snow angady amin'ny PP blad, tamin'ny lelan fanapahana aluminium, vary haben'ny 344mm 458 *
Snow Pusher amin'ny aina D-endrika grip
Mialoha ny Fotoana-hidin-trano mifandray noho ny oram-panala sy ny aluminium sahiratsy blead tahony
Taolan-tehezana Wave endrika manamafy lelan hery
Mitady idealy Snow angady miaraka amin'ny tahony Aluminium Manufacturer & mpamatsy? Manana fantina malalaka amin'ny vidiny lehibe mba hanampiana anao hahazo famoronana. Ny Telescopic Snow sahiratsy dia azo antoka tsara. Origin China izahay Factory ny Telescopic Snow Pusher . Raha toa ka manana fanontaniana, Aza misalasala mifandray aminay.
Alu Tube Snow sahiratsy
Car plastika Snow sahiratsy
Large Snow sahiratsy Pusher
Manual Snow angady
Tsindrio Snow manisy tahamaina L miasa zorony
Tsindrio Snow sahiratsy Miaraka Wheels
Small Snow lapelina
Small Snow lapelina Fa Car
Snow angady ny hovidiana
Snow sahiratsy famohana plastika
Snow sahiratsy Metal
Snow sahiratsy Wheel
Snow sahiratsy naterak'ireo kodiarantsika
Snow sahiratsy Miaraka Wheel
Snow sahiratsy Amin'ny Wooden tahony
Snow sahiratsy / Pusher
Snow sotron'afony Fa Snow Removal
Snow sotron'afony Fa Snow Removal Metal
Steel Snow sotron'afo
handeha ao andamosin'i Snow sahiratsy
naterak'ireo kodiarantsika Snow sahiratsy
Wide Snow sotron'afo Pushers
Wide Range Option ny Snow lapelina Tools
Small Snow ho an'ny Cars sahiratsy sy ny Trucks
Long tahony sisin-dalana Ice Scraper
Telescopic Snow sahiratsy ho Car amin'ny sombin-javatra mafy
Ergonomic Snow manosika angady
Manolan-Lock Telescoping Snow Roof Fiovana farany